Olom-pirenena ao Kocaeli afa-po amin'ny fivarotana finday - RayHaber
HomeTORKIAFaritra Marmara41 KocaeliOlom-pirenena ao Kocaeli Faly miaraka amin'ny Mobile Stops
08 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Faritra Marmara, TORKIA 0
Ny olom-pirenena kocaelide dia afa-po amin'ny fijanonana finday
Misy fijanonan-dàlana hanamboarana ny lalana amin'ny Salim Dervişoğlu Street, izay safidy hafa amin'ny lalambe D-100, izay ampiasana ny fitateram-bahoaka mankany amin'ny distrikan'i Kocaeli's Karamürsel, Gölcük ary Başiskele. Ny olom-pirenena dia maneho ny fahafaham-po avy amin'ilay gara vaovaon'ny finday vaovao namboarina teo akaikin'ny Adnan Menderes Overpass ao Izmit, ka nanamora ny mpandeha naka sy naka izany fitateram-bahoaka izany. Ny voalohany amin'ny fijanonana finday namboarin'ilay Kajiana Mocopolitan Kocaeli amin'ny faritra telo no vita, raha mbola mitohy ny fanamboarana paosy Mimar Sinan sy Turgut Özal Overpass.
NY FAMPIASA PUBLIKANA AN-TOKONY NY FIVORIANA
Manitatra ny lalana Salim Dervişoğlu tsikelikely, Kocaeli Metropolitan Munisipaly dia manangana fijanonana finday vaovao eny an-dalana. Adnan Menderes Overpass dia vita ary natolotra ho an'ny olom-pirenena. Noho ny fijanonan'ny finday vao haingana, Başiskele, Gölcük ary Karamürsel fitateram-bahoaka dia afaka misintona mora foana sy mandray mpandeha. Mahazo miverina amin'ny fitateram-bahoaka mora foana ny mponina ary midika izany fa afa-po amin'ny fijanonana finday vaovao izy ireo. Tao anatin'ny sehatry ny asa vitan'ny ekipa ao amin'ny departemantan'ny departemantan'ny siansa, mitohy ny fananganana fijanonana finday eo anilan'ny Mimar Sinan sy ny Turgut Özal Overpass Bridges.
IZAO NANOMPOANA NY FIVAROTANA TANANA AN-TANY
Levent Karagöz (40) dia nilaza fa niasa tao amin'ny Başiskele izy ary nampiasa ny station Halkevi izy raha nandeha anelanelan'i İzmit sy Başiskele. Nahatonga ny fitohanan'ny fifamoivoizana izany. Tsara ny nanamboarana paosy. Miarahaba ny munisipalintsika amin'ity raharaha ity. Tamin'ity fanadihadiana ity dia nanjary tsy tapaka sy malefaka kokoa io faritra io. Tsy mahomby ny fitohanana lehibe eto. Amin'ity asa ity dia manome serivisy matetika kokoa izahay amin'ny fitaterana. ”
“Fotoam-pifidianana Voalohany ARY NAHITANAO”
Ny fisotroan-dronono Cevdet Göçlü (74) dia nilaza fa izy no nampiasa ny tobin'ny finday voalohany ary tiany izany. Voasakana ny lozam-pifamoivoizana mety hitranga eto. Miaraka amin'ity fanadihadiana ity, ny mpandeha roa dia afaka miditra amin'ny fiara mora kokoa ary ny fiara dia afaka mijanona sy ajanona mora kokoa. Fony teo ambanin'ilay tetezana io no nijanona teo afovoan'ilay arabe ireo fiara. Ankehitriny na ny mpandeha na ny fiara fitaterana dia navotsotra. Te-hisaotra ny kaominina Metropolitan aho ”.
Ny mponina dia mihomehy amin'ny endriky ny Metro Kadıköy-Kartal 03 / 09 / 2012 Fihetsiketsehana mihomehy ao amin'ny metro 17 Tamin'ny volana Aogositra, nohavaozin'ny Praiministra Erdogan "Passerelle Kadikoy - Kartal Metro" dia faly mitety. Ny 32 avy any ambanin'ny tany ihany no mijanona amin'ny fifamoivoizana avy any Kartal ka hatrany Kedikoy izay milaza fa tonga any amin'ny vahoaka Aziatika ao Metro mankany Kaynarca'ya miandry ny Metro Transportation Press sy ny Lehiben'ny Fifandraisana Fifandraisana dia nandray ny fomba fijerin'ny mpandeha an-tongotra. Ity ny maso mpitsidika Kadıköy - Kartal Metro, Tevfik Eraslan (BANKER) Tena faly aho nanararaotra izany niaraka tamin'ny zanako. Nitondra fiara aho satria ny fitateram-bahoaka hafa dia tsy mety tsara amin'ny fampiasana ny fianakaviana. Nandany fiara aho tamin'ny fotoana nandehanako tamin'i Araç
Ny New Train YHT Ankara YHT dia nahafa-po ny mponina 01 / 11 / 2016 Ny New Train Station YHT Ankara YHT Nahazo fahafaham-po: Ny New Ankara YHT Train Station, tanora, antitra, mpianatra, mpiasam-panjakana ao an-dalambe rehetra nivory. Ny olom-pirenena dia nanome ny marika feno ho an'ny fitateram-bahoaka goavana ny filoham-pirenen'i Ankara YHT filohan'ny Erdogan. Ankara YHT Station, izay manampy ny harena ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, nilaza fa afa-po tamin'ny serivisy nomena azy izy ireo. "Ny tontolo izao Ankaralılar ho an'ny YHT toerana hita eo ny lehibe indrindra tetikasa," Ity fiantsonana no mazava voalaza fa ny faran'ny vanim-potoana iray ao Tiorkia, "hoy izy. Olom-pirenena daty vaovao gara no naorina tsy mikasika ny Ankara Train Station, Ankaray, mba ho mifandray amin 'ny famindrana ny BAŞKENTRAY sy Keçiören Metro koa sitraky ny zava-misy. "SAKAFO ...
Ireo mpitaingina bisikileta dia faly amin'ny fiara fitaterana vaovao 24 / 06 / 2014 Ireo mpitaingina bisikileta dia tena faly amin'ny lalam-baovao: Ny lalambe vaovao, izay nosokafana tamin'ny herinandro lasa, dia tondraka ireo mpitaingina bisikilety sy ireo te-hitsidika an'i Uludağ. Ny fiara fitaterana vaovao dia safidin'ny olom-pirenena sy ny tarika bisikileta. Teferrüç dia mandray ny fofon'ireo tarika izay te-hanombantombana ny faran'ny herinandro amin'ny fanatanjahantena. Ireo mpitaingina bisikilety tao amin'ny fiara an-dalamby mankany Uludağ, milaza fa ireo olana tranainy dia tsy nisaotra ny tanàna intsony. 10 TL fanampiny fiara ho an'ny bisikileta, vondrona bisikileta, "ny fiara fitaterana taloha 40 dia nandray, tsy maintsy niandry antsasak'adiny izahay rehefa feno ilay lalamby hafa. Ankehitriny dia afaka mitondra fiara miaraka amin'ny olona iray bisikileta mankany amin'ny Sarıalan isika nefa tsy miandry", hoy izy.
Mahafa-po tokoa ve ny olom-pirenena amin'ny High Speed ​​Train? 03 / 10 / 2012 Voalohany aloha, Ankara-Eskişehir ary avy eo Ankara-Konya amin'ny tolo-kevitra farany momba ny fanadihadiana momba ny YHTs ho an'ny asa fanompoana mahaliana. Ny lalamby dia nanomboka niaina ny vanim-potoana volamena tamin'ny High Speed ​​Trains (YHT). Voalohany, nokarakarain'ny Ankara-Eskişehir sy Ankara-Konya ny andalana YHT. Herintaona taty aoriana, raha mbola mikasa ny hampiasa ny tsipika Marmaray sy Eskişehir-İstanbul YHT, dia mitohy ny fananganana ny tsipika Ankara-Sivas YHT. Ny tetikasa rehetra vita amin'ny tetikasa fanofanana haingam-pandeha ao Ankara-İzmir sy Bursa dia vita. Na dia nomanina tsy ho ela aza ny fananganana ireo tetikasa ireo, ny fanadihadiana ampahibemaso nataon'ny Minisitry ny Fitaterana, ny Maritime Affaires sy ny Fifandraisana ho an'ny YHT dia nahatonga valiny nahaliana. Research ...
Mahafa-po tokoa ve ny olom-pirenena YHT'den? 07 / 10 / 2012 Voalohany aloha, Ankara-Eskişehir ary avy eo Ankara-Konya amin'ny tolo-kevitra farany momba ny fanadihadiana momba ny YHTs ho an'ny asa fanompoana mahaliana. Ny lalamby dia nanomboka niaina ny vanim-potoana volamena tamin'ny High Speed ​​Trains (YHT). Voalohany, nokarakarain'ny Ankara-Eskişehir sy Ankara-Konya ny andalana YHT. Herintaona taty aoriana, raha mbola mikasa ny hampiasa ny tsipika Marmaray sy Eskişehir-İstanbul YHT, dia mitohy ny fananganana ny tsipika Ankara-Sivas YHT. Ny tetikasa rehetra vita amin'ny tetikasa fanofanana haingam-pandeha ao Ankara-İzmir sy Bursa dia vita. Na dia nomanina tsy ho ela aza ny fananganana ireo tetikasa ireo, ny fanadihadiana ampahibemaso nataon'ny Minisitry ny Fitaterana, ny Maritime Affaires sy ny Fifandraisana ho an'ny YHT dia nahatonga valiny nahaliana. Research ...
Ny mponina dia mihomehy amin'ny endriky ny Metro Kadıköy-Kartal
Ny New Train YHT Ankara YHT dia nahafa-po ny mponina
Ireo mpitaingina bisikileta dia faly amin'ny fiara fitaterana vaovao
Mahafa-po tokoa ve ny olom-pirenena amin'ny High Speed ​​Train?
Mahafa-po tokoa ve ny olom-pirenena YHT'den?
Tsy afa-po amin'ny fiarabe mpitatitra ny mpandeha Crimea
Faly i Eskişehir Konya YHT mpitsoa-ponenana
Fitaterana an-dalamby ho an'ny firenena voaomana amin'ny vokatra
Sincan-Kayaş Manohitra ny Kapitalista Satisfista
Kadıköy-Kartal Metro izay nisy ny voalohany